1875: Wang Jueyi (王 觉 一) weghaara onye ndu dika nna ochie nke iri na ise nke agbụrụ Xiantiandao (先天 道 way uzo nke elu igwe mbu); Wang hibere otu ịrọ òtù "Mgbalị Ikpeazụ" (mohou yizhu, 末 后 一 着)
1905: Nna nna nke iri na isii Liu Qingxu (刘 清虚) kpọrọ aha "Yiguandao" (一贯 道).
1919: nna ochie nke iri na asaa, Lu Zhongyi (路 中 一), ghọrọ onye ndu.
1925: Lu Zhongyi nwụrụ; Onye nwanne ya nwanyị bụ Lu Zhongjie (路 中 节) nwere nwa oge.
1930: Zhang Tianran (张 天然) na Sun Suzhen (孙素贞) weere dị ka ndị isi iri na asatọ.
1934: Zhang gara Tianjin na Qingdao; ọ tọrọ ntọala ụlọ nsọ nke omume (daode fotangỌ bụrụ na ị) na Tianjin, na-ewebata oge ọganihu ngwa ngwa na China.
1938: Zhang nwere nzukọ “stovu” mbụ ya maka ndị isi ọzụzụ emere na Tianjin.
1947: Zhang nwụrụ na Nanjing.
1950: Akwụkwọ akụkọ ndị mmadụ na-akwado igbochi Yiguandao pụtara, na-egosi mmalite nke iwu na China.
1951: Sun Suzhen gara Malaysia wee biri na Hong Kong.
1951-1953: A machibidoro Yiguandao iwu ma machibido ya dị ka otu iwu na-akwadoghị na mkpọsa ndị China megide ọha nzuzo na otu heterodox.
1954: Sun Suzhen kwagara Taiwan.
1975: Sun Suzhen nwụrụ na Taiwan.
1987: Onye omebe iwu Yuan kwupụtara Yiguandao ka ọ bụrụ iwu na Taiwan.
1987: E guzobere Republic of China I-Kuan Tao Association.
Yiguandao bụ okpukpe syncretic nke China. Nke mbụ e guzobere na ya n'oge a na 1930s, o nwere mgbọrọgwụ miri emi na usoro nkwenkwe ndị China. Ebe ọ bụ na 1950s, a kwụsịrị ya n'ógbè ndị China. Ka o sina dị, Yiguandao nọgidere na Taiwan na n'akụkụ ndị ọzọ nke Eshia.
Ndi otu ndi Yiguandao weghachite mgbakwunye ha na Wang Jueyi (王 觉 一, 1832-1886?). Wang bụ onye ndú okpukpe nke nọ na narị afọ nke iri na itoolu na Northern China. Ọ bụ ezie na a maara ya nke ọma dị ka onyeisi nke iri na ise nke Ụzọ nke Former Heaven, ọdịnala okpukpe nke sitere na narị afọ nke iri na asaa, a na-ekwukwa na ọ tọrọ ntọala ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha kwupụtara na iwu akwadoghị ma ọ bụ "heterodox" . Otu ìgwè, "Ozizi nke Mgbalị Mgbalị (mohou yizhujiao 末 后 一 着 教), mesịrị ghọọ Yiguandao. E kwuru na Wang edepụtawo ọtụtụ ihe odide sụgharịrị, gụnyere Nyocha na Isi Iyi nke Penitering Unity (yiguan tanyuan 一貫 探源) nke o gbakwunyere Neo-Confucian siri ike ịkọwa n'elu ozizi ndị dị ugbu a sitere na Quanzhen Daoism (全真道) (ZhoU 2011).
Mana ezigbo onye nchoputa Yiguandao bụ Zhang Tianran (张 天然, 1889-1947). Zhang weghaara obere ndi mmadu ketara n'aka nna ochie nke iri na asaa, Lu Zhongyi (路 中 一 (1849? -1925), ma gbanwee ya n'ime oru nke ruru eru n'oge a. otu site n'iso onye ndu ndi ozo, Sun Suzhen (Abu aja, 1895-1975), na 1930.
Zhang gara n'ihu ịgagharị na nkuzi na omume ndị o ketara. Ihe mbụ o mere bụ ime ka ememe ahụ dị mfe (Irons 2000). N'akwụkwọ ya, Zanding Fogui (Iwu, Gbasara ụkpụrụ iwu dị iche iche), o gosipụtara ihe ndị dị ichiiche dị ichiiche ketara site na narị afọ nke iri na itoolu. Ịrụ ọrụ na-adịgide adịgide ka na-eguzo na obi nke njirimara otu, ma ugbu a, ọ dị mfe ma dị mkpụmkpụ. Ọ na-arụkwa ọrụ dị mfe, na-esi site na nhazi usoro itoolu ruo anọ.
Zhang na-elekwasị anya na ịgbasa otu. O guzobere netwọk nke ụlọ nsọ, nke a kpọrọ fotang (佛堂) n'ebe ugwu China. N'otu oge, ọ nọrọ ọnwa isii n'ọdụ ụgbọ mmiri dị na Tianjin. Ọ gbalịrị igbanwe onye ọ bụla ọ na-agba ọsọ, gụnyere onye na-elekọta ụlọ oriri na nkwari akụ ya na ndị ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya. Ka ha na-ewepụta oge ọ bụla, ha kpọgara ya na ụlọ ọrụ mara mma n'okporo ámá. N'ebe ahụ, ọ hụrụ ndị na-ege ntị.
Ụlọ ọrụ ahụ na-eme ihe nkiri na-eme ka Ụlọ Nsọ nke Omume na -daode fotang Akwukwo Igbo). Ụlọ nsọ Tianjin wee bụrụ ebe etiti nke ngwa ngwa nke Yiguandao. Ndị ozi ala ọzọ, Zhang, bụ ndị aka ha họọrọ, zigara Shanghai, Manchuria (mgbe ahụ n'okpuru ọrụ ndị Japan), Beiping (Beijing), na Nanjing, bụ isi obodo ahụ n'oge ahụ. Mgbe njide na njide ejidere Zhang na 1936, Yiguandao zụlitere njikọ siri ike n'ime gọọmentị mba. A na-eto eto. Ọbụna ọbịbịa nke agha zuru oke na Japan site na 1937 nwere ike ime ka mgbasa ozi ngwa ngwa gbasaa. N'ụzọ dị iche, Yiguandao ama ọganihu n'ebe ndị ọchịchị Nationalist na-achị nakwa nke Japanese (Sung 1996). Ọganihu a ngwa ngwa ga - ebute ebubo nke nkwekọrịta na ndị Japan, mana enweghi ihe akaebe nke mmekọrịta (Yiguandao-History 2017). Mgbe agha ahụ gasịrị, na 1946, ọchịchị Nationalist nyere iwu iji kpochapụ Yiguandao. N'afọ sochirinụ, ngwọta nke nkwekọrịta kwere Yiguandao ka ọ nọgide n'ihu akwụkwọ ọhụrụ, Òtù Na-ahụ Maka Àgwà Ọma nke China. N'agbanyeghi ihe eji ede aha ya, Yiguandao abiawo anya na China.
Oge agha mgbe agha gasịrị bụ otu n'ime nnukwu mgbagwoju anya. Zhang nwụrụ na 1947. N'ebe a Yiguandao otu na China nọ na elu ya; dị ka otu akwụkwọ si kwuo, ndị òtù ya karịrị mmadụ 12,000,000. Uzo di iche iche biara n'ime ije. Dika ndi otu ndi na-eguzosi ike n'ihe nye nwunye ya nke mbu, Liu Shuaizhen (刘 率 贞), ndi isi ndi Yiguandao nogide na-eguzosi ike n'ihe nye Sun Suzhen, [Image n'aka nri] nke ndi otu nna ochie nke iri na asatọ (Jordan 1982). Na mgbakwunye na mgbanwe nduzi gbanwere mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Na 1949, ndị Kọmunist kwụsịrị mmeri n'ọtụtụ ndị agha Nationalist na agha obodo. Ndị ọchịchị Nationalist na ndị fọdụrụ n'ime ndị agha ya kwagara Taiwan.
Ndị gbara ọsọ ndụ gụnyere ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ Yiguandao. Ọtụtụ ndị ezigala ha n'ụlọ nsọ ha, ma ọ bụ, na ụfọdụ, site na Zhang Tianran n'onwe ya, na ntụziaka maka ịzụlite Yiguandao na Taiwan. Na Taiwan, ndị ọhụrụ ahụ chọtara ihu igwe na-anabatakarị. Taiwan amalitewo dị ka ógbè ndị ọrụ ugbo nke Japan ma gbapụ nnukwu ihe ọjọọ site na Agha Ụwa nke Abụọ. Ndị obodo ahụ nwere nkwurịta okwu na ndị nabatara ọhụrụ, ebe ọ bụ na ole na ole n'ime ndị obodo ahụ na-asụ Mandarin. Ka o sina dị, ha na-emeghe anya na Yiguandao na-elekwasị anya na ozizi Confucian, ememe ofufe, na nri anaghị eri anụ. Uzo a gbasaa ngwa ngwa, n'agbanyeghi mkpagbu ndi ochichi Nationalist na nsogbu site na okpukpe Buddha siri ike. E hiwere ụlọ nsọ Yiguandao mbụ na 1946, na mpaghara ugwu nke Yilan (Yiguandao-History 2017).
Na Taiwan, òtù ahụ nwere àgwà ụfọdụ. Ndị ozi ala ọzọ na-arụ ọrụ na-enweghị onwe ha, nke mere ka ha nwee ike ịmepụta alaka osisi dị ike. Ọgbọ ọ bụla nọgidere na-asọpụrụ Sun Suzhen, bụ onye mesịrị gaa Taiwan na 1954. Nte ededi, enye ama ada usụn̄ emi mîkemeke nditịn̄ mme ufan̄ usụn̄ emi ẹdaha. Onye ọ bụla qianren (Ọzọkwa, "okenye") na-elekọta alaka ghọrọwanye ike na ha ikike.
Ihe ọzọ kpatara mmepe nke usoro onwe onye bụ nchịkwa gọọmentị. Ndị ọchịchị Nationalist nọgidere na-enyo okpukpe anya ma jiri ịnụ ọkụ n'obi kwụsịrị Yiguandao. O si n'echiche dị otú a maka ụlọ nsọ nke ọ bụla na ndị ndú ha ka ha nwee obere profaịlụ. A na - ejidekarị ndị ndú, usoro a na - akpọkarị "ịnakwere òkù ịṅụ tii," ọ bụ ezie na ole na ole ka enwere ogologo oge. Mmekọrịta mmekọrịta nke antagonism a na - emewanyewanye n'oge 1960s, Yiguandao nwekwara mmetụta n'ime otu KMT (Guomindang). Nke a mechiri na nkwado iwu na 1987. Site na 2005, otu a na - agụ 810,000 na Taiwan, ma ọ bụ 3.5 pasent nke ndị bi na ya (Lu 2008).
N'ihe atọ nke Taiwan Yiguandao bụ ọbịbịa ya na-elekwasị anya na ụkpụrụ Confucian. E nyere ụlọ nsọ na klas Confucian. Ndị a na-ewu ewu na ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ, ọtụtụ n'ime ha na-akwaga n'obodo ukwu ma rụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọhụrụ. Ndị nwe ụlọ na-adọrọ mmasị Yiguandao, na-eduga n'inwe njikọ siri ike dị n'etiti Yiguandao omume na ndị isi obodo Taiwanese. Njikọ a ga-aga n'ihu dị ka ụlọ ahịa Taiwanese kwagara n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia na China.
Kemgbe 1987, Yiguandao ejirila rụọ ọrụ na Taiwan. E hiwere nzukọ nchịkọta nche, nke Republic of China I-Kuan Tao Association, na 1987. Nzukọ a na-ahazi nzukọ kama ọ naghị ejikọta Yiguandao dị ka otu okpukpe. N'ezie, ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ìgwè Yiguandao adịghị. Ọgbọ ọ bụla na-agbaso ụzọ nke aka ya. N'ụzọ dị iche, Yiguandao dị ka onye na-emegharị emepe enwewo ike itinye mmetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezighị ezi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Taiwanese, na ìgwè dị iche iche na-ekwusara n'ihu ndị na-eme egwuregwu (Clart 2018).
Ọnọdụ dị na China dị nnọọ iche na Taiwan. A na-akpọ Yiguandao ma na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ akụkụ nke Òtù Ndị Na-emegide Anti-Heterodox na Nzuzo Societies Movement (fandong huidaomen 反动 会 道门) nke 1951-1953. A tụbara ndị ndú Yiguandao n'ụlọ mkpọrọ na, mgbe mgbe, ha gburu kpamkpam. A kpochapụrụ Yiguandao dịka netwọk okpukpe, ọ nọgidere bụrụ naanị ebe nchekwa si n'aka 1930s na 1940 (Dubois 2005).
N'afọ ndị na-adịbeghị anya ahịa Taiwanese ejiriwo nwayọọ nwayọọ weta ụlọ nsọ Yiguandao n'ụlọ ọrụ ha. I-Kuan Tao Association emeela ka ndị na-ahụ maka ndị ọchịchị na-aga n'ihu. Dị ka ọ dị n'akụkụ ndị ọzọ, Yiguandao ejirila nwayọọ nwayọọ kwụsị mmekọrịta akụ na ụba na mmekọrịta n'etiti Taiwan na China. A na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe, òtù ahụ na-ekwurịta okwu na ndị isi okpukpe na China. N'ezie, Yiguandao alaghachiworị na Chile. Ajụjụ dị ugbu a bụ oge ole ọ ga - ewe tupu e mee ya n'ihu ọha.
Ọganihu Yiguandao abụghị nanị Taiwan na mba China. A na-achọta ụlọ nsọ Yiguandao na netwọk ụlọ nsọ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Asia, karịsịa na Hong Kong, Korea, na Japan; n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia nile; nakwa n'ọtụtụ mba Europe na North America. Ọ bụ ezie na mmebawanye n'ebe ndị nwere nnukwu agbụrụ dị iche iche nke China nọ na-arụ ọrụ, ịgafe na mba ndị ọzọ dị n'Eshia gosipụtara otu ọchịchọ ahụ iji gbasaa nke a na-ahụ maka usoro ahụ site na mmalite ya.
A malitere ụlọ nsọ na Hong Kong na Malaysia na 1930s. Dị ka e kwuru n'elu, Sun Suzhen, onye isi na nke iri na asatọ, bi na Malaysia na Hong Kong n'etiti 1951 na 1954. Taa Uguandao General Assembly dị na Korea, Myanmar, US, Thailand, Japan, Indonesia, Paraguay, UK, Australia, Brazil, na South Africa.
N'ozuzu, ndị nnabata dịgasị iche iche malitere ọrụ ha na obodo ndị obodo China. Ọtụtụ n'ime ụlọ nsọ nwere nsogbu na-adọta mmasị karịa obodo Chinese, ma nọgide na-agwa ndị na-asụ Chinese okwu. Nke a bụ eziokwu na North America, ọ bụ ezie na ụlọ nsọ ole na ole ejiriwo ike na-asụgharị Bekee ma ọ bụ Spanish na ememme ha. N'izugbe, Yiguandao abụrụla onye si mba ọzọ na-abụghị ndị Asia.
N'ọtụtụ mba Eshia, ọfụụ, òtù ahụ enweela ihe ịga nke ọma na-agafe karịa obodo ndị China. Na Korea na Thailand, Kampuchea, na Myanmar ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị òtù a bụ ụmụ amaala na ndị na-abụghị Chinese. Yiguandao na-enwekwa ọganihu na Singapore na Malaysia, bụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ na-asụ Chinese.
Aha ahụ bụ Yiguandao, "ụzọ nke na-ejikọta ịdị n'otu," na-ezo aka na nkebi ahịrịokwu nke isi nke 4 nke Analects nke Confucius nke Nna-ukwu kwuru "Ụzọ m bụ otu na [niile-] pervading" (wu dao yi yi guan zhi 吾道 一 以 贯 之). Echiche a na-ebute ebe nile na okwu Yiguandao: e nwere otu Ụzọ nke jupụtara na Nature. Nkọwa bụ na ụdị nsụgharị nke Ụzọ ahụ dị n'ime Yiguandao naanị. Ọ bụ ezie na ndị nkụzi na-aga n'ụzọ ha na-apụta ìhè na ozizi nke ọdịnala ndị ọzọ, Yiguandao dị n'obi n'emeghị ka ndị okpukpe karịa okpukpe ndị ọzọ.
Yiguandao si n'okpukpe okpukpe a ma ama na-abịa n'oge-Imperial China nke fere nne ochie. Ọtụtụ n'ime echiche sitere na ofufe nne nke oge ochie abanyela na ozizi Yiguandao. Ndị a gụnyere echiche nke oge na ọrụ ụmụ mmadụ. Na soteriological scheme, e nwere afọ atọ: Green Yang, Red Yang, na White Yang. Kwa afọ ka onye Buddha, Lamplighter Buddha (Dipamkara) na-elekọta, Buddha akụkọ (Sakyamuni), na Buddha nke ọdịnihu (Maitreya). Ugbu a, oge White Yang ga-ahụ mmebi nke ụwa. A na-enye ndị mmadụ Dao (ọhụụ) iji kwadebe ha maka nlọkọtaghachi na nne ochie ahụ.
Ọhụụ Yotuandao soteriological na-agagharị na nlọghachi a na nne mama ochie. Ọ na-ebi n'eluigwe, ọchịchị nke ụkpụrụ (litian 理 天). N'ebe ahụ ka o kere ụmụ mmadụ 9,600.000,000. Anyị niile nwere otu ihe ahụ Chineke nyere ya. Otú ọ dị, anyị na-etinye aka n'ihe onwunwe, na mpaghara nke phenomena (xiangtian 象 天), ma chefuo ọdịdị Chineke anyị.
Nne nne ochie, site na ọmịiko ya n'ebe ụmụ ya nọ, zigara ndị nnọchianya n'oge gara aga ịkụziri ụmụ mmadụ: Buddha atọ (Lamplighter, Sakyamuni, Maitreya), tinyere chi niile na ndị dị iche iche nke okpukpe nile, dịka Jizọs na Mohammed. A na-akpọ nkuzi ha jiao (教). Ozizi okpukpe nile jiao. mgbe jiao dị ọtụtụ, ha na-eto na-enweghị isi site n'otu ebe ahụ, Dao n'onwe ya. Enwere otu ezi Dao, Dao of Mother Ancient, nke a na-ahụ nanị na nkụzi Yiguandao (Sung 1996).
Dị ka onye a họọrọ nke nna nke nne ochie, ọ bụ ọrụ Maitreya ịzọpụta ọtụtụ mkpụrụ obi fọdụrụnụ dị ka o kwere tupu mbibi ikpeazụ nke ụwa. Nke a bụ ezi ọhụụ apocalyptic. Ya mere, nkuzi Yiguandao, bu ndi mmadu. Ndị òtù ga-arụ ọrụ oge iji hụ na a zọpụtala ndị ha hụrụ n'anya.
Dịka ozizi Yiguandao na-akọwa, na oge mbụ (Red Yang) oge mbụ, nke mbụ, na-atụgharị uche n'ọtụtụ afọ, tupu ị nweta Dao nke ezi nghọta. Taa, otu "na-ebute ụzọ, mgbe ahụ na-azụlite [Ụzọ]" (xiande ọhụrụxiu 先得 后 修) (Clart 2018). "Inweta Dao" na-ezo aka n'ịbanye Yiguandao. Usoro ugbua bu ihe kwesiri ikwere iji chekwaa nkpuru obi dika o kwere mee. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-esonye ga-azọpụta, ọ ka na-eme ka ndị òtù na-eme omume na omume ọma.
Omume di na nwunye bụ akụkụ dị mkpa nke Yiguandao. Ememe Yiguandao na-eje ozi iji jikọta ọgbakọ dị iche iche nke ịkwanyere nsọpụrụ nsọpụrụ nye ihe okike nke eluigwe na ala. Iji hụ na ndị uwe ojii na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha uhie uhie, ka ha na-ehulata ma na-ebili n'otu ebe n'ihu ebe ịchụàjà na ogologo oge, ihe dị mgbagwoju anya nke ofufe bụ mgbe niile.
Ememe ndị a na-agụnye gụnyere arịrịọ, inye onyinye, na mbido. A na-eme ememe niile n'ihu ebe ịchụàjà. Ebe ịchụàjà nwere ike ịbịa chi dị iche iche ma ọ bụ enweghị chi ọ bụla. Mana otu ihe dị mkpa bụ ala (母 灯), oriọna na-egosi mama ochie ahụ, yana ọkụ abụọ. [Foto dị n'aka nri] Nke a bụ ọkụ oriọna na-enwu ma kpochapụ n'oge ememe ahụ.
Na omume, ihe nke ebe ịchụàjà dị iche iche na-agbanwe agbanwe. Otu ebe ịchụàjà nwere ike ịme Buddha Maitreya dị ka onye etiti. Onye ọzọ nwere ike itinye ihe oyiyi Sakyamuni Buddha n'etiti. Guan Gong 关 公, Chi chi agha na azụmahịa, Guanyin (观音), bodhisattva nke ọmịiko, Confucius, ma ọ bụ nọmba ọ bụla nke chi ndị ọzọ na-ahụkarị n'elu ebe ịchụàjà Yiguandao. Ọtụtụ ụlọ arụsị nọgidere na-etinye ihe oyiyi ma ọ bụ ihe osise foto nke ndị nna ochie iri na asatọ. Zhang Tianran na Sun Suzhen, na njedebe nke ebe ịchụàjà ahụ. Na ụfọdụ, alaka, ihe oyiyi niile dochie anya ihe edere n'elu mgbidi. Otú ọ dị, ụlọ nsọ niile nke Yiguandao ga-enwe ebe ịchụàjà dị nsọ nwere ihe nnọchiteanya ihe atụ nke nne ochie.
Ememe a na-ebido na-ebido na-eleba anya n'enyefe akụ atọ ahụ. Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ a na-atụ aro atọ akụ Buddha (Buddha, Dharma, na Sangha), na Yiguandao ọ na-ezo aka na ihe kpamkpam dị iche. Akpa mbu nke Yiguandao bụ oghere nke "ihe omimi omimi" (xuanguanqiao 毛关 窍), ebe dị n'etiti nku anya. Nke abụọ bụ mantra nzuzo, okwu ise ahụ (wuzikoujue 五 字 口诀). Na nke atọ bụ akara aka, ma ọ bụ mudra (hetongyin 合同 印), iji mee ihe n'ememe niile. Mgbe nnabata nnaputa ahụ kọwapụtara akụ atọ ahụ maka ịmalite, aha zuru ezu na aha ọma na aha ọma (gongdefei 港德 费) na-eji nlezianya depụta ya na mpempe akwụkwọ wee zigara eluigwe n'elu ọkụ. N'ụzọ dị otú a, ịmalite ọ bụghị nanị na ọ ga-enweta Dao kama ọ ga-edebanye aha ya na Heaven. Ndebanye aha kwesịrị ekwesị na-eme ka ntinye abanye. Mbido Yiguandao bụ usoro ndebanye aha (Irons 2000).
Yiguandao na-akwalite ọhụụ omume dị oke nro. A na-agba ndị òtù ume ume ka ha bụrụ onye anaghị eri anụ. N'ụlọ nsọ, ọtụtụ uwe ejiji. Ndị ikom ahụ na-egwu ntutu isi; ndị inyom na-etinye ntutu isi ha na mkpụmkpụ buns ma jiri ụgbụ isi. Tụkwasị na nke ahụ, Yiguandao na-akwalite ọhụụ nke Confucian nke ndụ kwesịrị ekwesị. Otu bụ onye dị umeala n'obi. A na-akwanyere ndị agadi ùgwù, na-eme agadi na-enye ọtụtụ ikike na ụkọ. A na-atụ anya na a ga-enyocha akwụkwọ. Otu uzo isi gosiputa ezi ofufe dika ekpere site n'inwe ndi ezinulo ha hapuru na Yiguandao. Enwere ike inye aka site na usoro nke chaoba (Sita), ememe nke nzoputa nke ndi nna nna ebe ha "sipuru na ala ala ala.
Dị ka Yiguandao si eche, ịnweta Dao bụ ihe ùgwù nke a na-ekwesịghị iburu n'uche. Ya mere, a na-atụ anya ka ndị òtù niile na-agbasa ozizi Yiguandao ma na-enye ụfọdụ aka na-eto eto. Nke a ga-agụnye ịmebe ebe ịchụàjà ma rụọ ọrụ iji gbasaa Dao n'ime ebe ọhụrụ.
Otu omume dị mkpa maka mmegharị ahụ bụ fuji (扶乩) mkpughe. Na fuji bụ ozi ederede nke sitere n'aka chi nye ọgbakọ site na onye na-ajụ ase. Onye na-ajụ ya nwere ike ịbụ onye nwere ike ịbanye na ntanya. Mana ihe kariri, ọ bụ otu ndị mmadụ atọ na-anata nnyefe ma dee ya site na iji desktọọpụ. Otu n'ime otu a ga-ejide osisi ahụ, mgbe mgbe, a na-ejigide osisi n'elu osisi, deekwa ozi na ájá. Onye nke abụọ ga-agụ ozi ahụ, ma wepụ ya kpamkpam site na smoothing aja. Nke a na-enye onye mbụ ohere ịnọgide na-ede akwụkwọ na-enweghị nkwụsịtụ. Onye nke ato nke otu ga-ede ozi. Ndị otu a na-abụkarị ụmụaka, ụmụ agbọghọ na-aga n'ihu. Maka iji ájá dee ozi ahụ, a na-akpọkarị ụdị akwụkwọ a kaisha (开 沙), "meghee aja."
Fuji bụ ụzọ omenala nke ịgbazinye akwụkwọ dị nsọ maka mkpebi ndị e mere n'ime nzukọ ahụ. N'ihi ya, a ghaghị imebi ya na mmetụta. O doro anya na ụfọdụ ndị Yiguandao ajụwo fuji dịka usoro a na-eji eme ihe na-eme ka a kwụsị (Clart 2018). Ndị ọzọ dị iche iche na-anọgide na-eji ya. Dị ka nchịkọta nkwupụta okpukpe, akụkụ Yiguandao buru ibu fuji mkpughe bụ ihe dị oké mkpa iji nweta nghọta nke ìgwè ahụ.
Niile Yiguandao dị iche iche bụ nnukwu ụlọ ọrụ. Na obi nke Yiguandao nzukọ bụ ụlọ nsọ (fotang), nke a na-akpọkwa agbanwe agbanwe (道场, "Dao ubi"). Ọnọdụ dị mkpa n'ime ụlọ nsọ bụ onye na-elekọta ebe ịchụàjà (tanzhu 坛主), ndị enyemaka okpukpe (foyuan 佛 员, "Buddha" so na ndị kwere ekwe ("Dao na-ekwu," daoqin 道 亲). Maka ndị isi kwere ekwe ụlọ nsọ ahụ dịka ohere nke nnọkọ oriri na ọṅụṅụ nakwa nke omume.
Ịrụ ọrụ na ọkwa dị elu karịa ụlọ ọrụ ụlọ nsọ ọ bụla bụ isi ọnọdụ nke nnabata nnyefe (ana-akpọkwa ya dịka "ndị na-emepụta ihe," (dianchuanshi 点 传 师), onye isi nnyefe nnabata (lingdao dianchuanshi 领导 点 传 师), na ndị agadi (qianren, nwekwara utu aha daozhang (道 长), "okenye nke ụzọ"). A na-asọpụrụ ndị agadi. Ma ndị nnabata nnyefe bụ isi. Na mgbakwunye na ndị ọrụ okpukpe bụ isi, ha na-abụ ọrụ nlekọta n'etiti ebe a na-achịkwa ihe ka ọtụtụ. Ọganihu Yiguandao dịka nzukọ bụ n'ihi ọrụ a nke na-arụsi ọrụ ike, nke nwere mkpali.
Ụlọ nsọ adịghị adị iche; a na-ejikọta nke ọ bụla n'ụlọ nsọ ndị nne na nna. A na-ejikọta ụlọ nsọ ndị nne na nna na nnukwu ụlọ nsọ ha. Ndị a ga-abụkarị ebe onyeisi ndị isi na-adabere. N'ọnọdụ ụfọdụ, ụlọ nsọ ụlọ ga-arụ ọrụ dị ka ụlọ isi nke ụlọ.
O yiri ka a na-achịkwa alaka Yiguandao n'oge 1930s na 1940s na China, mgbe Zhang Tianran ji akara. (Ọmụmụ ihe ndị ọzọ nwere ike imezi foto a n'ọdịnihu.). Dịkarịa ala ebe ọ bụ na oge Taiwan (post-1949), Yiguandao ejiriwo oke mkparịta ụka (Lu 2008). A na-ekwukarị na mmadụ iri na asatọ na-arụ ọrụ na Taiwan. Ọ bụ ezie na ndị a nile na-asọpụrụ Sun Suzhen, bụ onye bi na Taiwan ruo mgbe ọ nwụrụ na 1975, na omume ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla na ọgbọ ọ bụla mere onwe ya. Tụkwasị na nke ahụ, oge 1949-1987 nọ Taiwan bụ otu n'ime mmegbu gọọmentị, na ọkwa dị elu ma ọ bụ dị ala karị, ọ bụkwa ihe ezi uche dị na agbụrụ ọ bụla ịrụ ọrụ n'enweghị onwe ya. Ihe a ga - enweta taa bụ na Yiguando adịghị ekwu okwu otu olu, ụfọdụ n'ime ọgaranya ma buru ibu bụ n'ezie okpukpe dị iche iche nke aka ha.
Yiguandao taa na-eche ihe isi ike na-eme n'ọdịnihu n'ọdịnihu nke na-adabere na nduzi na ozizi. Ogologo oge a abughi okpukperechi nke etitibere na uto ngwa ngwa. Taa, a na-emewanye uto a ma na-atụgharịkwa n'ebe ụfọdụ. Ya mere, usoro ahụ na-arụ ọrụ n'ime ụzọ abụọ dị mkpa. Na Taiwan na n'ọtụtụ mba Asia, ọ bụ okpukpe siri ike. Na Europe, North America, Australia, Africa, na China ala, Yiguandao na-arụ ọrụ n'ụsọ mmadụ, dị ka ndị si mba ọzọ ma ọ bụ ndị ozi ala ọzọ.
N'obodo ndị isi (Taiwan, Hong Kong, Japan, Korea, Thailand, Malaysia, Singapore na Indonesia) Yiguandao dị iche iche bụ okpukpe siri ike. Nke a pụtara na ha na-enwe nchegbu banyere ọtụtụ okwu ndị na-adịghị mkpa n'oge ọfụma na-arụ ọrụ ala ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, ndị nnabata nnyefe ahụ na-ahụ na ọrụ ha na-elekwasị anya na nlekọta nlekọta na-elekọta ndị mmadụ kama ịbụ nanị nchekasị na mgbasa ozi. Onye na-eduzi ụlọ nsọ na-echegbu onwe ya banyere otú ọgbakọ ha si emekọrịta ihe na ọha mmadụ. Ndi mmadu gburu nsogbu ndi mmadu na-abia n'ihu: iji ogwu eme ihe, umuaka na-elekọta ndi nne na-arusi oru, umuma oru, na nká. Mkpakọrịta na òtù okpukpe ndị ọzọ nọ n'ógbè ahụ bụ ihe nkịtị. Ndị ndú na-agbaso iwu na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara. Ụlọ nsọ nwere ike ịnwe nkwụsị nwayọọ nwayọọ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ dị ka oge mbụ nke nbudata ngwa ngwa. Ndị na-emepụta ọgbakọ na-agbanwe agbanwe dị ka ndị na-esote ọgbọ nke abụọ na nke atọ. Na ilekọta ndị agadi na-aghọ ihe kachasị mkpa. Ọtụtụ ụlọ nsọ Yiguandao na-agba mbọ ka ha gbanwee ọdịdị ọdịdị ọdịnala ha ma lekwasị anya na mgbanwe na mgbanwe ngwa ngwa na mba ndị ọbịa.
Na mba ndị na-abụghị ndị isi, ìgwè Yiguandao na-ese okwu na-emetụta ụdị okpukpe ọ bụla, na-achọta ozi ziri ezi iji dọta ndị na-eso ụzọ. N'ụlọ, ndị isi na-egosipụta mmụọ siri ike nke itinye aka n'ihe kpatara ha. Mgbe ha na-eleta ụlọ nsọ, nke na-abụkarị ebe a na-edeghị akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ahịa na-emepụta ihe, otu na-ahụ otu mmụọ nri (开li), "na-emepụta ọhịa," nke kpaliri ndị nnabata nke mbido iji banye n'ime obodo na ókèala ọhụrụ na China na Taiwan. Ma ọtụtụ omenala Yiguandao zutere taa abụghị n'Eshia ọwụwa anyanwụ. Ebumnuche na usoro anaghị ebigharị n'otu ụzọ ha si eme n'ebe ọdịda anyanwụ Eshia. Ịghọta Maitreya Buddha ozugbo bụ ihe atụ: a maghị ya na Europe ma ọ bụ American. A na-azụ ndị nnabata nnyefe Yiguandao ka ha rụọ ụka ma kwurịta Yifuandao tiori, ma na-agbasi mbọ ike ịgbanwe ozi ha iji dabara omenala ọhụrụ.
Ijikwa ihe ịma aka ndị a na-achọ ntụgharị uche ọhụrụ na ndu. Ụzọ dịgasị iche iche na nnukwu ụlọ nsọ dị iche iche enwewo mgbe nile n'ịkụzi ndị nnabata na ndị na-enyere ndị okpukpe aka. Ọ bụ Zhang Tianran, bụ onye nwere "nzukọ stovu" nke mbụ, malitere ịmalite ịkụzi akwụkwọọ bụ otu Para) maka nzube a na Tianjin na 1938. Ọ ghọtara na ọ bụ naanị ntọala nke ozizi na arụmụka ga-ekwe ka ndị ndú nwee ihe ịga nke ọma na gburugburu ebe. Nlereanya a taa na-amalite ịmalite. Otutu n'ime uzo ozo ndi bara uru na Taiwan, dika Fayi Chongde (发 一 崇德) na Baoguang Jiande (宝光 建德), guzobere omumu mahadum. Mmụta karịrị usoro iwu nke ọzụzụ na-amalite ịmalite mgbalị ọhụrụ ịkọwa ozizi. O yikarịrị ka njem ahụ ọ ga-achọ ka e kwughachiri ozizi na ememe siri ike iji hụ na ọ ga-adị ndụ n'ọdịnihu.
Image #1: Foto nke Zhang Tianran, onye guzobere njem Yiguandao.
Image #2: Foto nke Sun Suzhen, onye nọchiri Zhang Tianran.
Image #3: Foto nke ememe Yiguandao na ndị na-eguzo n'ihu ebe ịchụàjà na-egosipụta ihe oyiyi nke pantheon.
Image #4: Foto nke ala (母 灯), oriọna na-egosi mama ochie ahụ, yana ọkụ abụọ.
Clart, Philip. 2018. "Yiguan Dao." Pp. 587-617 na Akwụkwọ ntuziaka nke Ọwụwa Anyanwụ Eshia Ọhụrụ Ntugharị Okpukpe, nke Lukas Pokorny na Franz Winter dere. Leiden: Brill [na-abịa].
DuBois, Thomas David. 2005. Obodo Dị Nsọ: Ngbanwe Ndị Na-ahụ Maka Okpukpe na Okpukpe na Gburugburu North China. Honolulu: Mahadum nke Hawaii Press.
Irons, Edward A. 2000. Tian Dao: Net of Ideology na okpukpe Chinese. Ph.D. Ọkà Mmụta Theological Graduate.
Jordan, David. K. 1982. "Akụkọ Na-adịbeghị Anya nke Ụzọ Celestial: Association nke Pietistic Chinese." China nke oge a 8: 435-62.
Lu, Yunfeng. 2008. Mgbanwe nke Yiguan Dao na Taiwan: Idozi Mgbanwe nke Okpukpe. Lanham, MD: Akwụkwọ Lexington.
Sung, Kwang-yu. 1996. Chendao chuandeng [nnyefe okpukpu nke Celtic Way]. Zhonghe: Wang Qiming.
"Yiguandao-History." Infopoint. Nweta site na https://infopoint.co/en/Yiguandao/History na 30 November 2017.
Zhou, Yumin. 2011. "Nchoputa nke mbu n'ime akwukwo akwukwo mbu nke uzo nke ime ka ha di n'otu na mmekorita ya na Yigetuan," Pp. 293-314 na Ma Xisha na Meng Huiuing, eds., Ezi okpukpe na Shamanism. Leiden na Boston: Iju.
Billioud, Sebastian. 2018. "Nna-ukwu Yiguandao Zhang Tianran (1889-1947): Haiography, Deification na Production nke Charisma na Nzukọ Okpukpe nke Oge A." Na Vincent Goossaert, Ji Zhe, na David Ownby, eds,., Ndinam nke ndị nsọ na Modern na Contemporary China: Amụma na Ọchịchị okpukpe. Oxford na New York: Oxford University Press [na-abịa].
Clart, Philip. 2000. "Imeghe Ọzara maka Ụzọ nke Eluigwe: Okpukpe ọhụrụ nke China na Greater Vancouver Area. "Journal of Chinese Religions 28: 127-44.
Jordan, David K. na Daniel L. Overmyer. 1986. Flying Phoenix: Akụkụ nke Sectarianism na Taiwan. Princeton: Princeton University Press.
Li, Shiyu. 1948 . Xianzai Huabei mimizongjiao [Okpukpe nzuzo na ugbu a Northern China]. Taipei: Guting shuju,
Sung, Kwang-yu. nd Tiandao gouchen"Ndepụta nke Celestial]. Taipei: bipụtara onwe ya.
Yu Yu. 2005. Yiguan Dao Gaiyao [Okwu mmeghe nke Yiguandao]. Họrọ: Qingju Press.
Zhang, Tianran. 1992. Ịgbaghasị Nkwado [Ụkpụrụ Buddhist Nwa Oge] (Taibei: Zhengyi Shanshu chubanshe.
Zhong, Fu. 1999. Yiguand Dao fazhan Shi [akụkọ banyere Yiguandao mmepe]. Taipei: Zhengyi shanshu chubanshe.